भारी वर्षाका कारण जलमग्न काठमाडौं – Sandesh Press
July 10, 2021 608
काठमाडौं, असार २६ गते । काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा भएको भारी वार्षका कारण सडक तथा आवासीय क्षेत्र डुबानमा परेका छन् । ए’क्कासि भएको भारी वर्षले पुतली सडकबाट अनामनगर जाने क्षेत्रमा सडक जलम’ग्न भएको थियो । काठमाडौँको धोबी खोला कोरिडोर आसपासका क्षेत्रमा डुबान भएको छ ।
वर्षाका कारण पानी जाने निकास नहुँदा सो क्षेत्रमा डुबान भएको हो । कोरिडोर आसपासका क्षेत्रका केही घरहरूमा बाढी पसेको छ । निरन्तरको वर्षाले मदन भण्डारी कलेज वरप रको क्षेत्र जलमग्न भएको थियो । सडकमा राखिएका गाडी समेत डुबेका थिए भने सर्वसाधारणको आवतजावतमा समस्या भएको थियो । शनिबार परेको वर्षाका कारण काठमाडौंका उपत्यकाका विभिन्न ठाउँ जलमग्न भएका छन् ।
काठमाडौंको बानेश्वर, अनामनगर, घट्टेकुलो क्षेत्र जलमग्न भएको थियो । अनामनगरको घर तथा पसलमा पानी पसेको छ । सडकमा राखिएका गाडी समेत डु’वानमा परेका थिए भने सर्वसाधारणको आवत जावतमा समस्या भएको थियो । धोवी खोला कोरिडोरलाई व्यवस्थित बनाइपनि पानी निकास हुने ठाँउको अभाव भएपछि सो क्षेत्र डु’वानमा पर्दै आएको छ ।
Prevयी चिज खाएपछि भुलेर पनि नखानुहोस् पानी, निम्त्याउँछ घाँटीको समस्या !
Nextकपाल झरेर हैरान भयो ? उसोभए घरमा यी ३ चिज मिसाएर बनाउनुहोस् नेचुरल स्याम्पु !
पिकनिक खान गएका मेयरका छोराको पिकनिक स्थलमै मृत्यु,
नेपाल बन्द ! विशाल आन्दोलन गर्ने घोषणा